တိုင်ထံအက္ခရာ - ဝီကီပီးဒီးယား
မြောက်ပိုင်းထိုင်း, တိုင်လူး, ခွန်, အီသန် and Lao
[[New Tai Lue alphabet|တိုင်လူးစာအသစ်]
တိုင်ထံ အက္ခရာ ( ထံ သည် "ကျမ်းစာသုံး"ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။), သည် လန်နအက္ခရာ ( ထိုင်း: อักษรธรรมล้านนา RTGS: Akson Tham Lan Na ; မြန်မာ: လန်နအက္ခရာ ) သို့မဟုတ် တွာမူးအန်း ( မြောက်ပိုင်းထိုင်း၊ listen (ကူညီ·ချက်လက်), တိုင်လူး ) သည် ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ( ခမ်းမောင် )၊ တိုင်လူး နှင့် ခူန်း အတွက်သုံးသော စာအရေးအသားစနစ် ဖြစ်သည်။ တိုင်သုံးဘာသာစကား အားလုံးသည် တိုင်အနောက်တောင်ပိုင်းဘာသာစကား ၏အုပ်စုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ထံအက္ခရာကို လာအို (သို့မဟုတ်လာအိုဟောင်း) နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပေလက်စာမူများ နှင့်မှတ်စုစာအုပ်များတွင်အသုံးပြုသောအခြားစကားများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းအက္ခရာကို ထံ (သို့) ယွန်းအက္ခရာဟုလည်းခေါ်သည်။ 
မြောက်ပိုင်းထိုင်းဘာသာ သည် (စံ) ထိုင်း နှင့်ရင်းနှီးသောဆွေမျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှ လူ ၆ သန်းနီးပါးနှင့် လာအိုနိုင်ငံ တွင်ထောင်ပေါင်းများစွာကပြောဆိုကြပြီးအချို့မှာ လန်နအက္ခရာ တွင်စာတတ်မြောက်ကြသည်။ ဒီဇာတ်ညွှန်းကိုဘုန်းကြီးတွေကဖတ်နေဆဲ။ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် ဘာသာစကား ၆ ခုနှင့်ထိုင်း ဘာသာစကား ၅ ခုသည် ထိုင်းအက္ခရာ သို့ကူးယူရာတွင်အခက်အခဲဖြစ်စေသည်။ လူငယ်များကြားတွင်ဇာတ်ညွှန်းကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်ရှင်သန်လာစေရန်စိတ် ၀ င်စားမှုများရှိသော်လည်းထပ်တိုးရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုမှာခေတ်သစ်ပြောဆိုသောပုံစံသည်ကမူအမ်ဟုခေါ်သည့်အဟောင်းပုံစံနှင့်အသံထွက်ကွာခြားမှုဖြစ်သည်။ 
တိုင်လူး၏ဟောပြောသူ ၆၇၀,၀၀၀ ရှိသည်။ ၁၉၅၀ မတိုင်မီမွေးဖွားခဲ့သူအချို့သည် Tham ၌စာတတ်မြောက်ကြသည်။ Old Tai Lue ဟုလည်းခေါ်သည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်] script ကိုလည်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင်ဆက်လက်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ Tai Tai Lue ဇာတ်ညွှန်း ကို Tham မှဆင်းသက်လာသည်။ Khünပြောသူ ၁၂၀,၀၀၀ ရှိပြီး Lanna သည်တစ်ခုတည်းသောဇာတ်ညွှန်းဖြစ်သည်။
ဇင်းမယ်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအပြင်ဘက်တွင် လန်နစာလုံးများဖြင့်ရေးသားထားသော ဝတ်မိုခမ်းတူအင်နှင့် (ထိုင်းဘာသာဖြင့်လမ်းနံပါတ် ၁၁၉)ကို ဖော်ပြထားသောဘုတ်။
</br> / lɛ̄ː /
စ / nāː /
</br> / sɔ̌ːsɔ̌ːŋhɔ᷇ːŋ / ဏ္ည
</br> / ɲa᷇ʔɲa᷇ʔ / link=
</br> ra rng
/ lɯ᷇ʔ / ၕ
/ lɯ̄ː /
တိုင်ထံ - -
အ အာ ᩍဣ ᩎဤ ᩏဥ ဦ ᩑဧ အော ဩ
အိုင်ပီအေ / ʔáʔ / / ʔāː / / ʔíʔ / / ʔīː / / ʔúʔ / / ʔūː / / ʔēː / / ʔōː /
၁ အသံ အမှတ်အသားများ
၂ တိုင်ထမ်နှင့် အက္ခရာဆင်တူသည့်ဘာသာများ
၄ သင်္သကရိုက် နှင့်ပါဠိ
၄.၁ အမျိုးအစား တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham vagga
</br> mai yo
</br> /máj.jɔ́ʔ/ link=
</br> mai kho chang
/ká/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦂ ก ກ က ក
/xá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦃ ข ຂ ခ ខ
/xá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - - ฃ
/ka᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦅ ค ຄ ဂ គ
/xa᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ᦆ ฅ
/xa᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ฆ ဃ ឃ
/ŋa᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦇ ง ງ င ង
/t͡ɕá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦈ จ ຈ စ ច
/sá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ฉ ဆ ឆ
/t͡ɕa᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦋ ช ຊ ဇ ជ
/sa᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ᦌ ซ
/sa᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ฌ ဈ ឈ
/ja᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ญ ည ញ
/tá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ฏ ဋ ដ
/tʰá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ฐ ဌ ឋ
/dá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦡ ฑ,ด ,ດ ဍ ឌ
/tʰa᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ฒ ဎ ឍ
/na᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ณ ဏ ណ
/tá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦎ ต ຕ တ ត
/tʰá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦏ ถ ຖ ထ ថ
/ta᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦑ ท ທ ဒ ទ
/tʰa᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦒ ธ ဓ ធ
/na᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦓ น ນ န ន
/bá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦢ บ ບ ပ ប
/pá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ᦔ ป ປ
/pʰá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦕ ผ ຜ ဖ ផ
/fá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ᦚ ฝ ຝ
/pa᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦗ พ ພ ဗ ព
/fa᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ᦝ ฟ ຟ
/pʰa᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦘ ภ ဘ ភ
/ma᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦙ ม ມ မ ម
/ja᷇/  တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦍ ต่ำ ຍ ယ យ
/já/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ᦊ อยกลาง, อย ຢ
/la᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦣ ร ຣ ရ រ
/lɯ́ʔ/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - - ฤ ၒ ឫ
/la᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦟ ล ລ လ ល
/lɯ̄ː/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - - ฦ ၔ ឭ
/wa᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦞ ว ວ ဝ វ
/sá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ศ ၐ ឝ
/sá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ษ ၑ ឞ
/sá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦉ ส ສ သ ស
/há/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦠ ห ຫ ဟ ហ
/la᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - ฬ ဠ ឡ
/ʔá/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ᦀ อ ອ အ អ
/ha᷇/ တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham - - ฮ ຮ
လန်န တွင်ဂဏန်းနှစ်စုံရှိသည်။ ပထမဝတ် လေက်နိုင်ထံ ကို ဝတ်ပြုရေးအတွက် ရည်ရွယ်သုံးသည်။ နောက်တစ်ခုမှာ လေက်ဟိုအာ ကိုနေ့စဉ်ဘ၀တွင်အသုံးပြုသည်။ 
တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham
๐ ๑234567 8 9
0 င် 1234567 8 9
( တိုင်ထံအရေးအသားသည် အိန္ဒိယအက္ခရာများ နှင့်အားလုံးတူညီသည်။) ရေးသားဖို့ပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့အရေအတွက်ကိုအသုံးပြုသည် ပါဠိ (အထူးနှင့်ဆက်စပ်ဘာသာစကားများ Sanskrit ) ။ ပါဠိကိုရေးသောအခါဗျည်း (၃၃) ခုနှင့်သရအက္ခရာ ၁၂ လုံးသာအသုံးပြုသည်။
အမျိုးအစား တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham vagga[ပြင်ဆင်ရန်]
velar က [ka] ခ [kha] ဂ [ga] ဃ [gha] င [ṅa]
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ စ [ca] ဆ [cha] caဇi [ja] ဈ [jha] ည [ña]
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဋ [ṭa] ဌ [ṭha] ဍ [ḍa] ဎ [ḍha] ဏ [ṇa]
သွား တ [ta] ထ [tha] ဒ [da] ဓ [dha] န [na]
ဓာတ်ခွဲခန်း ပ [pa] ဖ [pha] ဗ [ba] ဘ [bha] မ [ma]
အသံအတန်းအစား ဇ L
ယ [ya] ရ [ra] လ [la] ဝ [va] L
ၐ [śa] ၑ [ṣa] သ [sa] ဇ
↑ Everson, Michael, Hosken, Martin, & Constable, Peter. (2007). Revised proposal for encoding the Lanna script in the BMP of the UCS.
↑ Natnapang Burutphakdee (October 2004)။ Khon Muang Neu Kap Phasa Muang (PDF)။ Presented at 4th National Symposium on Graduate Research, Chiang Mai, Thailand, August 10–11, 2004။ Asst. Prof. Dr. Kirk R. Person, adviser။ Chiang Mai: Payap University။ June 8, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ The reason why they called this language ‘Kammuang’ is because they used this language in the towns where they lived together, which were surrounded by mountainous areas where there were many hill tribe people.
↑ In Tai Lue
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တိုင်ထံအက္ခရာ&oldid=558640" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၃:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။